“Kana kuti munhu abata chinon'oresa munhu chingave chin'orwa chipi nechipi zvacho chin'oresa munhu mukusaziva, paanozongoziva zvaaita anobva ava nemhosva. “Munhu anovhurumukira kupika mhiko yokuita zvakaipa kana zvakanaka, kana kuita chipikepike zvacho chemhiko chingaitwe nomunhu akazonyatsoziva mhiko yaakaita pakarepo atova nemhosva yechimwe chazvo. “Kana munhu aine mhosva yechimwe chezvinhu izvozvi ngaareurure chitadzo ichocho.
 “Kana munhu akakanganisa mukusaziva aita udyire hokusapa zvinhu zvinoera zvinofanira kuripwa kuna Tenzi, anofanira kuunza mupiro wokuripa mhosva kuna Tenzi wehondohwe yomudanga make, isina chinoshoreka pairi. Iwe ndiwe unotema mutengo wayo wemari yesirivha inowirirana nemari yesirivha iya yeShekeri yomuNzvimbo Inoera. Ichochi chibayiro chemupiro wokuripa mhosva. Anofanira kudzosera pakare zvinhu zvinoera zvaaifanira kunge akapa. Pazvikamu zvishanu zvakaenzana, ngapapamhidzirwe chimwechete, achipe kumupristi. Mupristi ngaamupirire chibayiro chokupfupira zvitadzo nehondohwe iya yemupiro wokuripa mhosva. Chitadzo chake chonobva charegererwa.
 “Udza vaIsiraeri kuti, ‘Zvingaitike kuti munhu anotadzira Tenzi, mukusaziva, achityora mutemo wake achiita zvinorambidzwa nomutemo.’ “Kana ari mupristi akazodzwa atadzira Mwari achiita kuti vanhu vave nemhosva, ngaapire kuna Tenzi handira ichiri duku isina chinoshoreka pairi, achiripira chitadzo chake.
“Kana riri gungano rose ravaIsiraeri rinenge ratadzira Tenzi mukusaziva asi zviri zvakavandika kumaziso egungano vapara mhosva yokuita chimwe chezvakarambidzwa naTenzi,
“Kana ari mumwe munhuwo zvake atadzira Mwari mukusaziva, apara mhosva yokuita zvakarambidzwa naTenzi,
 Reurura zvitadzo zvako Akakomborerwa zvake munhu akaregererwa kukanganisa kwake ane chitadzo chakafushirwa. Akakomborerwa munhu asingapiwe mhosva naTENZI, munhu asina mweya wounyengedzi. Pandakanga ndisina kureurura chitadzo changu, ndakaperezeka muviri pamusana pokuwuwura kwangu zuva rose nokuti siku nesikati shamhu yoruoko rwenyu yakanga yakandiremera. Simba rangu rakapera kupwa sapachirimo. Dzepfunde Ndakareurura chitadzo changu kwamuri. Handina kuvanza uipi hwangu. Ndakati regai ndireurure zvikanganiso zvangu kuna TENZI. Imi makaregerera mhosva yechitadzo changu. Dzepfunde
Rakasvikondigunzva muromo naro rikati, “Tarisa uone wagunzwa muromo nevhunze iri hauchisina mhosva, chitadzo chako charegererwa.”
Nokudaro hapachisina anopiwa mhosva kuna vari muna Kristu Jesu,
Sokutaramukana kwakaita kumabvazuva nokumadokero ndokutaramutsa kwaanoita zvikanganiso zvedu kubva kwatiri.
2 VaKorinte 5:17
Saizvozvo kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva. Zvakare zvakapera, zvitsva zvakauya.
 Zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa pachena zvisinei nomutemo kunyange zvazvo mutemo navaporofita zvichiupupurira. Kururama ikoko kwaMwari kunoitika nechitendero muna Jesu Kristu kuna vose vanotenda pasina zvorusaruro nokuti munhu wose akatadza akakundika kusvika panodiwa naMwari kuti aponeswe.
2 VaKorinte 5:21
Pamusana pedu akaita kuti iye ave chitadzo uyo akanga asingazivi chinonzi chitadzo kuti maari tive noururami hwaMwari.
Achatinzwira ngoni zvakare agotsokodzera uipi hwedu pasi petsoka dzake. Muchakanda zvitadzo zvedu zvose pasi pasi pegungwa.
1 Johani 3:19-20
 Izvozvi ndizvo zvinotizivisa kuti tiri pachokwadi uye zvinotigadzanisa mwoyo pamberi pake kana hana dzedu dzotipomera mhosva, nokuti Mwari mukuru pane hana dzedu uye anoziva zvose.
nokuti mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari chaanopa pachena upenyu husingaperi muna Jesu Kristu Tenzi wedu.
Ini, ini ndini Iye Ari, anodzima zvikanganiso zvako ndichizviita pamusana pangu, zvitadzo zvako ndicharega kuzvirangarira.
Ndakazonzwa izwi guru mudenga richiti, “Zvino ruponeso nesimba noumambo hwaMwari wedu noukuru hwaMesia wake zvauya nokuti mupomeri wehama dzedu akakandidzirwa pasi; ndiye uya anovapomera mhosva siku nesikati pamberi paMwari wedu.
Kurwadzirwa mwoyo zvaMwari kunoita kuti munhu apinduke zvinosvitsa kuruponeso uye hazvirwadzise mwoyo; asi kurwadzirwa zvenyika kunounza rufu.
 Ko zvino totiiko nezvakadai izvi. Ko Mwari zvaari kudivi kwedu, ndiani angatirwise iye asina kuramba noMwanakomana wake waakatopirira isu tose. Haazotipawo here zvinhu zvose pamwechete naye. Zvino ndiani angape mhosva vasarudzwi vaMwari, Mwari zvaari iye anoruramisa. Ndiani angatipe mhosva? NdiJesu Kristu here iye akafa akamutswa muvafi ari kurudyi rwaMwari, iye anototireverera? Ndiani angatiparadzanise norudo rwaKristu? Kutambudzika here kana kuti nhamo, kana kushushwa here kana nzara kana kushaya zvokupfeka here kana pfumvu kana hondo yebakatwa here: sokunyorwa kwazvakaitwa, “Tiri kuurairwemi zuva rose, tinoonekwa sehwai dzokubaya?” Aiwa muna zvose izvi tiri vakundi vokutopfuuridza nokuna iye akatida nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba, kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.
kuti aratidze iye zvino kuti iye akarurama uye kuti anoruramisa munhu anotenda muna Jesu.
Asi munhu anokahadzika akadya anopara mhosva nokuti kuita kwake hakubvi muchitendero nokuti kuita kose kusingabvi muchokwadi chiri mumwoyo womunhu chitadzo.
Nokuti Mwari haana kutumira Mwanakomana wake pasi kuzopa pasi mhosva asi kuti pasi paponeswe naye.
Tenzi anebasa raakasikira chimwe nechimwe kunyange vakaipa vane zuva ravo repfumvu.
Nezvo pindukai mutendeuke kuti zvitadzo zvenyu zvipfudzwe kuti nguva iya yokumbofefeterwa nokuvapo kwaTenzi,
Vanangu ndiri kukunyorerai izvi kuti murege kupara chitadzo. Asi mumwe wenyu akaita chitadzo tino murevereri pana Baba, iye Jesu mururami.
 Mwari akamutaurira mukurota ikoku achiti, “Ndinozviziva zvangu kuti wakazviita mukusaziva pasina chakaipa chawaimbofunga mumwoyo mako. Ndini ndakaita kuti urege kunditadzira, saka ndisina kukubvumidza kumbomugunzva zvako. Zvino chidzorera mukadzi womuridzi. Murume wake achakunamatira ugorarama nokuti muporofita. Asi kana ukarega kumudzorera, chinyatsoziva zvako kuti ndokufa kwawava kuita uku, iwe navanhu vako vose.” Saizvozvo Abhimereki akamuka mangwanani-ngwanani akadaidza makurukota ake ose ndokuaudza zvose izvozvi. Varume ivavo vakatya zvikuru. Abhimereki akadaidza Abhurahamu akati kwaari, “Chiiko ichi chawaita kwatiri? Ndakakutadzira zvakaita sei zvaunobva wandiunzira chitadzo chakakura chikadai ini nenyika yangu? Zvawandiitira izvi, hazvifanire kumboitwa!” Abhimereki akati kuna Abhurahamu, “Waifungeiko kuita zvinhu zvakadai?” Abhurahamu akati, “Ndakazviita ndichifunga kuti vanhu vokuno havatye Mwari, uye kuti zvimwe vangandiuraye pamusana pomudzimai wangu. Izvowo ihanzvadzi yangu chaiyo, baba vedu mumwechete, takangosiyana kunanamai. Akazovawo mudzimai wangu zvake. Mwari paakandibvisa kumusha kwababa vangu, achindiita kuti nditame-tame, ndakaudza mudzimai wangu ndichiti, ‘Ndiitirewo mwoyochena kwose kwatinoenda, upote uchinditi, ihanzvadzi yangu.’ ” Abhimereki akatora hwai nemombe, navaranda vechikadzi nevechirume akapa izvozvo Abhurahamu, akamudzorerawo Sara mudzimai wake. Abhimereki akati, “Tarisa uone, nyika yangu yose iyi yauri kuona, enda unogara pose pose paunoda.” Akataurirawo Sara achiti, “Ndapa hanzvadzi yako chiuru chemari yesirivha yokuratidza kuti hauna nemhosva yose nokukuchenurawo pana vamwe vako vose vaunavo navanhu vose zvavo.”
Asi kuti chaive chiri chido chaTenzi, kumurwadzisa ndiye akamupa nhamo. Nokuzvipira kwaakaita kudaro somupiro wokupfupira zvitadzo achaona zvizukuru zvake, achaita kuti mazuva ake awande. Zvinodiwa naTenzi zvichabudirira zviri mumaoko make.
 Ndichasimuka ndiende kuna Baba vangu ndigondoti kwavari, ‘Baba ndakatadzira denga uye ndatadzawo kwamuri. Handichakodzeri kuti ndinzi mwana wenyu. Chindibatai somumwe wavashandi venyu.’
 Jesu akati kwaari, “Handikuti kanomwe asi makumi manomwe akapetwa kanomwe.” Saizvozvo umambo hwedenga hungafananidzwe namambo akanga achida kupedzerana navaranda vake vaiva nezvikwereti naye. Paakatangisa kutaura nezvezvikwereti izvozvo, pakauiswa mumwe kwaari akanga aine chikwereti naye chegumi rezviuru zvemari yamatarenda. Nokuda kokuti akanga asingakwanisi kubhadhara, tenzi wake akati ngaatengeswe pamwechete nomudzimai wake navana nezvose zvaaiva nazvo kuti chikwereti chiripwe. Nezvo muranda uya akagwadama pasi achimuteterera achiti, “Tenzi ndiitireiwo mwoyo murefu. Ndichakudzorerai zvose zvazvo.” Tenzi womuranda uyu akamunzwira tsitsi ndokubva amuti aende zvake ndokumuregerera chikwereti chake chiya. Asi muranda mumwecheteyo paakanga avakubuda, akasangana nomumwe mushandi pamwe naye, akanga ane chikwereti kwaari chezana remari yamadhenari. Akabva amuti dzvi pahuro, achiti, “Ndibhadhare chikwereti changu.” Mumwe muranda uya mumwe wake akati pasi gwadagwa achimuteterera achiti, “Ingondiitirawo mwoyo murefu ndinokudzorera.” Asi iye akaramba ndokuenda ondomuisa mujeri kusvikira abhadhara chikwereti. Vamwe vake, varandawo pamwe naye, pavakaona zvakanga zvaitika, zvakavatsamwisa kwazvo. Vakaenda vakandotaurira tenzi wavo zvose zvakanga zvaitika. Ipapo tenzi wake akamudaidza, akati kwaari, “Iwe muranda wakaipa, ndakakuregerera chikwereti chose chiya nokuti wakanditeterera. Wanga usingafaniriwo here kunzwira urombo muranda pamwe newe sokukunzwira tsitsi kwandakakuitira?” Tenzi wake akashatirwa akamuendesa kuvarangi mujeri, “Kusvikira abhadhara chikwereti chake chose. Ndizvo zvichaitawo Baba vangu vari kudenga kuno mumwe nomumwe wenyu kana musingaregererani nemwoyo wose.” Jesu paakapedza kutaura zvinhu izvi, akabva kuGarirea akaenda mudunhu reJudhea mhiri kwaJorodhani.